२५ लाख लगानीमा पूर्व मिस नेपाल अनुष्काले सुरू गरिन् 'माक्कुसे' :: अनुषा अधिकारी :: Setopati
पुष्टकारी र गुँदपाकको ब्रान्ड विदेशी बजार प्रवेश गर्ने तयारीमा
पूर्व मिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठ। तस्बिरः निशा भण्डारी/सेतोपाटी
पुष्टकारी र गुँदपाक, कुनै बेला काठमाडौंको मिठाइ बजारको राजा। काठमाडौंको कोसेली पनि जो देशका कुनाकन्दरासम्म पुग्थ्यो।
अधिकांश काठमाडौंबासीले स्वाद मानीमानी मुखमा घुलाउने पुष्टकारी र गुँदपाकलाई पछिल्लो दशक विदेशी मिठाइले पछाडि पार्दै लगेको छ। स्थानीय र यसको स्वादमा रमेकामाझ यसको मोह बाँकी भए पनि नयाँ पुस्ताको धेरै चासो देखिन्न।
आकर्षक प्याकेजिङ र विभिन्न स्वादका ब्रान्डेड मिठाइका अगाडि हातैले बनेका र साधारण पोकामा बेरिएका पुष्टकारी-गुँदपाक कसले रूचाओस्?
सन् २०१९ की मिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठ यस्तै सोच्थिन्। आफूले रमाइरमाइ खाँदै हुर्केको प्रिय मिठाइको उनलाई साँच्चै माया लाग्यो। सोचिन्, 'हाम्रो यो रैथाने मिठाइलाई पनि ब्रान्डेड चकलेटझैं फैलाउन पाए?'
अनुष्काले यसलाई सोचमा मात्र सीमित गरिनन्। काम थालिन्। करिब आठ महिना बजार अध्ययन गरिन्।
सबै चाँजो मिलेपछि सुरू भयो- 'माक्कुसे'।
माक्कुसेका पुष्टकारी। तस्बिर सौजन्यः माक्कुसे
नौ महिनाअघि स्थापित माक्कुसे 'लक्जरी' मिठाइ ब्रान्ड हो। हाम्रो बोलीचालीमा स्ट्यान्डर्ड चकलेट! हाल यो ब्रान्ड अन्तर्गत पुष्टकारी, गुँदपाकका साथै कुकिज उत्पादन हुन्छ। हाम्रा मौलिक मिठाइलाई माक्कुसेको आकर्षक प्याकेजिङ र ब्रान्डिङले 'लक्जरी स्विट्स' बनाइदिएको छ।
अनुष्काका अनुसार उनलाई यो अनुभूति नेपाल प्रतिनिधित्व गर्दै मिस वर्ल्डको अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा पुग्दा भएको हो।
'जित नभए पनि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्टेजमा चिनाउन पाउँदा निकै खुसी थिएँ। फेरि एकपटक नेपाललाई विश्वभर चिनाउने मन भयो। अनि यसैका लागि हाम्रो मौलिक मिठाइको व्यवसाय गर्ने निधो गरेँ,' उनले भनिन्।
मिस नेपालमा सहभागी हुनुपहिले उनी अस्ट्रेलियाको एउटा बैंकमा काम गर्थिन्। पछि नेपालमै काम गर्ने सोचले फर्किएको उनको भनाइ छ।
'नेपालमा काम गर्ने सोच पहिल्यैदेखि थियो। तर विदेशमा पढेर उतै काम गरिरहेकाले यताको बजारबारे धेरै ज्ञान थिएन,' अनुष्का भन्छिन्, 'मिस नेपाल भएपछि भने नेपाललाई विश्वव्यापी रूपमा चिनाउनै पर्छ भन्ने भावना आयो।'
माक्कुसेका मिठाइहरू। तस्बिर सौजन्यः माक्कुसे
अनुष्काका अनुसार माक्कुसे भनेको नेवारी शब्द हो जुन खानाको स्वाद बुझाउन प्रयोग हुन्छ। यो शब्दको ठ्याक्कै अर्थ बुझाउन भने सकिँदैन।
'कुनै मिठो परिकार खाँदा मनै भरिने आनन्दको भावनालाई माक्कुसे भनेर बुझाउँछौं। यसले मिठो स्वादप्रतिको हाम्रो भावना व्यक्त गर्छ,' उनले भनिन्।
व्यवसायमा कहिल्यै नजोडिएकी अनुष्काका लागि यो काम बिल्कुल नयाँ थियो। उनले अरू व्यवसाय पनि सोचेकी थिइन्। तर सोधीखोजी क्रममा नेपाली खाना, विशेषगरी मिठाइले पाउनुपर्ने चर्चा नपाएको महसुस गरिन्।
'विदेशतिर नेपाली मिठाइबारे कसैले सोधे भने हामीसँग नाम हुँदैन,' उनी भन्छिन्, 'पुष्टकारी र गुँदपाक हाम्रा हुन् जो ओझेलमा पर्दै गएको छ। यसको स्वाद बेग्लै र स्वास्थ्य महत्व पनि धेरै छ। त्यसैले यी परिकारले विश्व पहिचान पाउनै पर्छ।'
अझ दुई महिना त उनले घरमा आफैं गुँदपाक र पुष्टकारी पकाउन सिकेको बताउँछिन्।
'आफूले बेच्ने उत्पादनको सबै जानकारी र तरिका थाहा हुनै पर्छ,' उनले भनिन्।
तर अनुभवी व्यक्तिले पकाएजस्तो त कहाँ भयो र! त्यसैले यो कामको जिम्मा उनले तिनै अनुभवीहरूलाई दिएकी छन्।
गुँदपाक र कुकिजका यी नयाँ परिकारमार्फत् अनुष्काले मौलिक स्वादलाई फरक किसिमले प्रस्तुत गर्न खोजेकी छन्। यसले पुरानो स्वादलाई कुनै असर नपारेको उनको भनाइ छ।
हरेक परिकार काभ्रेका स्थानीय किसानबाट किनेको दूधबाट बनाइन्छ। यसमा प्रयोग हुने सबै सामान स्थानीय र रसायनबिहीन हुने उनको दावी छ।
'हामी स्वास्थ्यसँगै गुणस्तरमा पनि ध्यान दिन्छौं। जब उत्पादनलाई ब्रान्डका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ, तब अलिकति महँगो पर्छ नै। हामी मूल्यसँगै गुणस्तरमा भरपर्दो छौं भन्ने ग्राहकले बुझ्नुपर्छ,' उनी भन्छिन्, 'विदेशी चकलेट चाहिँ ठूलो ब्रान्ड, महँगो हुन्छ भन्दै जति परे भए पनि किन्न पछि पर्दैनौं। तर त्यही चकलेट नेपाली ब्रान्ड भए खर्चिन चाहँदैनौं। राम्रा नेपाली ब्रान्ड प्रोत्साहन गरेर अगाडि बढाउन सक्यौं भने मात्र प्रिमियम ब्रान्डका रूपमा स्थापित हुन सक्छ।'
त्यस्तै गुँदपाक पनि सिसाका डब्बामा आउँछ। बिर्कोबाहिर नेपाली कागजले नै बेरेर झिलिमिली डोरीले बाँधिएको छ।
'हाम्रो उद्देश्य प्याकेजिङमार्फत् पनि नेपाली मौलिकता झल्काउनु हो,' उनी भन्छिन्, 'हामीले अहिले प्याकेजिङमा गरेको खर्चभन्दा पाँच गुणा सस्तोमा चीनबाट सामान ल्याउन सकिन्थ्यो। तर हराउँदै गएक मौलिक कला बचाउन पनि यही रोजेका हौं।'
'मेरो अहिलेसम्मको कमाइ र मिहिनेत यसैमा छ। त्यसैले आफ्नो बच्चा जस्तै लाग्छ,' उनी भन्छिन्, 'मैले भविष्यमा के बन्छु भनेर कहिल्यै निर्णय लिन सकेकी थिइनँ। तर जे काम गरे पनि सफल हुन्छु भन्ने आशा मनमा रहन्थ्यो। मिस नेपालको उपाधि नै मेरो लागि टर्निङ प्वाइन्ट बन्यो। मैले थुप्रै सहयोगी हातहरू पाएँ र माक्कुसे सञ्चालन गर्न सफल भएकी छु।'
विदेशमा काम गरेजस्तो अनुभव नेपालमा होला-नहोला, उनलाई थाहा छैन। तर जे भए पनि पछि नहट्ने बताउँछिन्।
'काम गर्न जहाँ पनि गाह्रो हुन्छ। विदेश हेरी यहाँको व्यवस्थापन कमजोर होला। तर काम गर्नै सकिँदैन भन्ने होइन,' उनी भन्छिन्, 'मुख्यगरी यहाँ युवापुस्ताको नयाँ आइडिया सम्मान गर्दै उनीहरूलाई अघि बढ्न प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ। युवाले पनि आफ्नो काम धैर्यसाथ गर्नुपर्छ। अनि मात्र नेपाली उत्पादन विश्व बजारमा अगाडि आउन सफल हुन्छ।'
(माक्कुसेको सम्पर्कः फेसबुक पेज। इन्स्टाग्राम। वा ९८६१२०४९१०)
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस १०, २०७७, ०९:००:००